Rovan'Antananarivo :: Ho vita amin'ny volana mey ny asa fanarenana ny Lapan’i Manjakamiadana • AoRaha
Rovan’Antananarivo Ho vita amin’ny volana mey ny asa fanarenana ny Lapan’i Manjakamiadana
Fanamby goavana nataon’ny fitondram-panjakana ny faha­vitan’ny fanarenana ny Lapan’ i Manjakamiadana alohan’ny fakalazana ny faha 60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Efa manomboka ny asa ankehi­triny ary mandroso tsara manaraka ny fandaharana izay napetraky ny orinasa Colas manatanteraka ny fanavao­zana. “Amin’ny volana mey dia ho vita ny asa. Azo toka­nana alohan’ny fetin’ny fahaleovantena izany”, hoy ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy nandritra ny fitsidihana ny Rovan’Antananarivo nataony, ny sabotsy lasa teo.
Voahaja avokoa ny endrika sy ny maha izy azy ny Lapa. Misy mpahay tantara, arkeology, ary manam-pahai­zana manokana momba ny vakoka miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanavaozana. Natao mba hitazonan’ny lapa ny endriny sy ny maha izy azy hatramin’ny namola­volan’ireo mpanjaka nifan­dimby sy ireo manam-pahaizana amin’ny rafitry ny trano nanampy azy ireo izany, araka ny fanazavana azo. Nampidirina ireo hiaka farany amin’ny fiarovana sy ny fia­lana amin’ny mety ho loza kosa anefa ny lapa amin’ny maha vakoka sy Mozea azy. Mana­raka ny fenitra maneran-tany noho izany io lafiny io.
Nanararaotra ny fitsidihana nataony ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera namaha ny olan’ireo mpiasa eny amin’ny Rovan’Antanana­rivo izay tsy nandray ny karamany efa hatramin’ny taona 2017. Noraisina ho mpia­sam-panjakana izy ireo ary naloa avokoa ny karama rehetra izay tsy mbola voarainy.
CAN 2021 & Mondial 2022 :: Hijery mpilalao any Frantsa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea
Ahiahina fihotsahana :: Mitatao eny amin’ny fokontanin’ Ankazotokana ny loza goavana